"त्यो भुतमा केवल तिमी थियौ" [प्रेम पत्र] - pnpkhabar.com
You are at:Home»कला/साहित्य»“त्यो भुतमा केवल तिमी थियौ” [प्रेम पत्र]
By सन्दीप खत्री on २ फाल्गुन २०७४, बुधबार ०५:०२ कला/साहित्य
“आखिर के रैछ र जीवन !
एक काँटी सलाई,
एक थुप्रो खरानी,
तीन बाल्टी पानीले पखाल्यो,
सम्झनाका पाइलाहरु पछ्याउदै जाँदा आज भ्यालेन्टाइन डेको दिनमा एकपटक फेरी तिम्रो सम्झनाले अल्मल्याएको छ। मैले जीवनमा कति पाप र कति पुण्य गरे होला त्यो त इश्वरले हिसाब राखिराखेका होलान् तर तिमीलाई दिएको माया कति थियो त्यो भने म आफुलाई बाहेक सायद इश्वरलाई पनि थाहा छैन होला। आफ्नो हजुरआमाको सम्झनामा नातीले लेखेको माथिका यी २ पंक्ती जति सरल देखिन्छ मान्छेको जीवन पनि त्यति नै सरल भैदिएको भए कति सहज हुन्थ्यो।
मेरा असिमित प्रेमहरुले तिमीलाई आफ्नो बनाउन सफल भएको दिन म अझ पनि सम्झिन्छु। मलाई वर्तमान र भविष्य भन्दा बढी भूतले तर्साउछ किनकी त्यो भुतमा केवल तिमी थियौ र तिम्रो साथ् थियो। त्यो संसारमा म यति हराएको थिए कि मैले कहिले सोचिन तिमीबाट टाढा भएर पनि मैले अझ यति धेरै जिन्दगीका पलहरु बिताउनु छ भनेर। सायद त्यो नै मेरो ठुलो भुल भयो होला ? त्यसैले मैले जिन्दगी जिउन जानिन।
कहिलेकाहीं सोच्ने गर्छु मान्छेको दिमाग पनि कम्प्युटरको हार्ड डिस्क जस्तो भइदिएको भए तिम्रा यादहरु उहिले नै डिलिट गरिसक्ने थिए। फर्म्याट गरेर नयाँ जिन्दगीको सुरुवात पनि नगरेको हैन तर पनि तिम्रा यादहरुका फाइलहरु अटो रिकभर भैरहन्छन् भइरहन्छन्। यत्रो बर्षसम्म के तिमीले पनि एकपल मलाई सम्झेनौ होला र ? के एक पल पनि मेरो याद आएन होला र ? जुन मान्छेलाई तिन महिना छाडेर जानुपर्दा तिमी रातभरी रोएकी थियौ के तिमीलाई त्यो मान्छेको अनुहारले कहिले पनि सताउदैन होला र ?
आज पनि सम्झन्छु प्रेम छियाछिया भएको त्यो कालो दिन जुन दिन घाम र जुन अनि बर्षा र प्रचण्ड धुपको जस्तो बिछोड। मैले नचाहेर पनि तिम्रो बिछोडमा बिछोडिन पर्ने बाध्यता अझ भनौ नियति नै थियो होला हाम्रो । बाइ पनि भन्न नसकी कोमल नयनबाट आशुहरु झर्छ तर के गर्ने मिठो मिलनलाई बिछोड गराउने धन र अन्य कारण हुने रहेछ । सबैलाई मिठो मिलन नै मन पर्छ तर तितो बिछोडले छुटाइदिन्छ । तर शहनशिल बन्नुनै पर्ने हाम्रो जिन्दगीमा आहा मिठो मिलन कति मिठो अनि तीतो बिछोड कती नराम्रो ????
तिम्रो अनमोल समयलाई खेर फाल्नको लागि यो पत्र लेखेको हैन न मेरो अवस्था तिम्रो भन्दा कमजोर छ भनेर बताउनलाई नै हो। यो पत्र तिम्रो सम्झनामा कोरेको छु ताकी तिमीले पनि जिन्दगीको बारेमा केहि सिक्यौ होला भन्ने मेरो आशा रहेको छ। प्रेमलाई पैसामा तौलेर जुन खुसि तिमीले रोज्यौ त्यो खुसीमा तिमी कति खुसि छौ ? आज त्यहि जान्ने मन लगेर यो पत्र कोरेको छु। यदि यो पत्र तिमीसम्म आइपुग्यो भने कुनै पनि माध्यमबाट मलाई उत्तर दिनु है।
उही तिम्रो ?????